allsanaag.com - Shaqaalihii Villa Soomaaliya oo casharadii u fariistay
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3206	Days	12	Hours	59	Minutes	10	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Shaqaalihii Villa Soomaaliya oo casharadii u fariistay
Written by khalid	Shaqaalihii Villa Soomaaliya oo loo qaaday in dawladnimada la soo baro, ayaa casharkii u horeyey maanta qaatay. Shaqaalahan Villa Soomaaliya oo ka soo wada jeeda hal Beel ayaa loo qaaday Magaalo maddaxda dalka Burundi ee Bujumbura. Mashruucan Soomaalidan lagu barayo dawladnimada ayaa waxa maal gelinaysa Qaramada midoobay.
(ALLSANAAG) Kooxdan ayaa waxay ka mid yihiin, shaqaale gaaraya 120 oo ka mid ah shaqaalaha dawlada oo ka shaqeeya xafiiska Madaxweyne Xasan Culusoow iyo RW Saacid oo isugu jira Karaaniyaal (secretaries), Saraakiil yaqaan sida dawladu u shaqayso (protocol officers ) iyo isku dubaridayaal xafiisyada dawlada (administrators). Shaqaalahan dawlada Soomaaliya oo aan horay Xafiis uga soo shaqayn, hase ahaatee xilalka ku helay qaab Qabiil ayaa waxa tababarkan u diray oo isku soo duba riday Qaramada midoobey iyo Africa Union Mission in Somalia (AMISOM).